पढ्न मन लाग्दैन वा धेरैबेरसम्म टिक्दैन ? यी हुन् उपायहरू – Education Awareness
पढ्न मन लाग्दैन वा धेरैबेरसम्म टिक्दैन ? यी हुन् उपायहरू
२३ असार २०७६, सोमबार १८:४३
भन्छन् – पढ्नु र पौडिनु उस्तै-उस्तै हो रे, तरिका जाने सजिलै पार गर्न सकिन्छ, नजाने डुबिन्छ । यसर्थमा पनि पढ्ने कुरा नितान्त प्राविधिक एवम् मनोवैज्ञानिक कुरा हो । त्यसैले हामीले बलपूर्वक पढ्न खोज्नु हाम्रो मुर्खता हो ।
बलपूर्वक पढ्दा पनि केही कुरा तत्कालका लागि याद त हुन सक्छ तर यसले दिगोपना दिन भने पक्कै सक्दैन । अर्को कुरा, बलपूर्वक पढ्दा हाम्रा अगाडि किताब त हुन्छ, तर मन भने हामीसँग हुँदैन । कता कता बादलमाथि पुगिसकेको हुन्छ । त्यस समय न पढाइ राम्रोसँग हुन्छ, न त अन्य कार्य नै । यसरी हाम्रो महत्वपुर्ण समय बेकारमा गैरहेको हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, मन नलागी नलागी कुनै काम गर्दा सो काम पीडादायी पनि हुन जान्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष त यसरी जबर्जस्ती पढ्न खोज्दा मानिसको सिर्जनशीलता पनि नष्ट हुँदै जान्छ । यसै पढाइलाई पढुँपढुँ लाग्ने, पढेर छिटो बुझिने र पछिपछिसम्म पनि सम्झिरहने बनाउन पाए बिद्यार्थी जीवन कति सुन्दर हुँदो हो ? भन्ने सोचमा सबै हुनुहुन्छ होला ।
रुची र आनन्दका साथ कसरी प्रभावकारी रुपमा पढ्ने ? पढ्नुहोस् केही उपायहरूः
१. आफुले आफुलाई आफ्नो लक्ष्य सुनाइरहनुस्
अरुलाई भन्नुस्/ नभन्नुस् तर आफ्नो मनलाई आफ्नो गन्तव्यका बारेमा स्पष्ट पार्नै पर्छ । गन्तव्य प्रष्ट छैन भने पढ्नमा अल्छी लाग्ने, विषय कठिन लाग्ने कुनै पनि बहानामा पढाइ छोड्न खोज्छ मनले । मैले आज के पढ्नुछ र कति पढ्नु छ ? सो प्रष्ट हुनै पर्छ । अनि आज मैले यति पढें भने के हुन्छ ? मेरो जीवनको लक्ष्यमा यसले के प्रभाव पार्दछ, सो पनि जोड्न सके अझ राम्रो ।
यसरी लक्ष्य निश्चित भएको खण्डमा तपाईंलाई अध्ययनमा रुची बढ्नेछ र पढेको कुरा पनि पछिसम्मको लागि टिकिरहनेछ ।
२. समय सीमा तोक्नुहोस्
मैले यो च्याप्टर राम्रोसँग अध्ययन गरिसक्नका लागि आज १ दिनको मात्र समय छ भन्ने स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । त्यसो नभई जति पनि समय छ भन्ने म्यासेज तपाईंको मनले पायो भने अनावश्यक कुरालाई प्राथमिकतामा ल्याइदिन्छ । अहिले नपढेमा फेरि पढ्न समय पाउँदिन भन्ने स्पष्ट नपार्दासम्म पढाइ प्राथमिकतामा नै पर्दैन ।
३. मनोरञ्जन गर्दै पढ्ने बानी बसाल्नुस्
मनोरञ्जन/मस्तीले जो-कोहीको मनलाई सजिलै तानिहाल्छ । यसकारण पनि हामीले हाम्रो पढाइलाई पनि मनोरञ्जनसँग जोड्न सक्यौं भने पढेको कुरा सजिलै बुझिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर पछिपछिसम्म पनि यो टिकिरहन्छ ।
यसका लागि हामीले या त पढाइलाई नै तत्काल आनन्द, मस्ती वा रमाइलो कुरा प्राप्तिसँग जोडेर लिन सक्छौं या त पढाइलाई लक्ष्य प्राप्ति हुँदाको रमाइलो कल्पनासँग जोड्न सक्छौं ।
४. आत्मविश्वास बढाउनुस्, मनोबल उच्च राख्नुस्
म यो गर्न सक्छु भन्ने नभई कुनै पनि कार्यहरु सही रुपमा सम्पन्न हुँदैनन् । उपलब्धि हासिल हुँदैनन् । सजिल्यै गर्न सकिने कार्य पनि आत्मविश्वास कमजोर हुँदा राम्रोसँग गर्न सकिँदैन । त्यसैले पनि हामीले आफ्नो मनोबल उच्च राख्न जरुरी छ ।
यसका लागि आफैंले आफ्ना सकारात्मक पक्षहरुलाई हाइलाइट गर्दै जानु उत्तम हुन्छ, अरुले वाह-वाह गरेर सिर्जना भएको आत्मविश्वास भन्दा यो एकदमै दिगो र प्रभावकारी हुन्छ ।
५. तपाईंले किन पढिरहनु भएको छ ? स्पष्ट कारण बनाउनुस्
बिनाकारणको पढाइले कहिल्यै तपाईलाई सोचेको गन्तब्यमा पुर्याउने छैन । यो पाठ किन पढ्ने ? अहिले नै किन पढ्ने ? लगायतका सबै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ तपाईसँग । अन्यथा तपाईको मनले तपाईलाई पत्याउँदैन । जसको परिणाम पढ्नमा फिटिक्कै रुची रहँदैन । गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने सुविधा भएसम्म पढाइ लगायत कुनै पनि कार्यहरु प्रभावकारी हुँदैनन् । यी सबैकुरा प्रष्ट पार्न सक्नुभयो भने मात्र तपाईंको मनले विश्वास गर्छ । पढ्नमा सहयोग गर्छ ।
६. कति पढ्नु भो, कति पढ्न बाँकी छ ? स्पष्ट हुनुस् । हचुवामा नपढ्नुस्
त्यसैले पढाइलाई परिणाममा विभाजन गर्नुस्, कति पढ्नुपर्ने हो ? कति सकियो र कति बाँकी छ ? यी सबै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ तयार पार्नुस् ।
सारांशमा, हाम्रो मन र शरीरको तालमेल तब मात्र मिल्छ, जब हामीलाई आनन्द मिल्छ । त्यसैले तपाईंले यदि पढाइ आनन्ददायी कुरा हो भनेर मनलाई विश्वस्त पार्न सक्नु भयो भने सबै समस्या आफसेआफ समाधान हुनेछन् । र तपाईंको पढाइ सहज, दीर्घकालीन र प्रभावकारी अवश्य हुनेछ ।
कर्मचारीको तलब बढ्यो	१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:४३
मैले चाहेको साझेदारीपँर्ण यौन सम्बन्ध	२० बैशाख २०७६, शुक्रबार १९:०७
पाल्पामा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना, पाँचको मृत्यु
पाल्पा, १६ वैशाख । पाल्पामा जन्ती बोकेको जिप सोमबार साँझ.....